Achịcha Strawberry ọhụrụ na Strawberry Buttercream - Achicha
Achịcha Strawberry ọhụrụ na Strawberry Buttercream Ntụziaka
Achicha Strawberry na strawberry buttercream mere site na strawberries ohuru!
Achicha Strawberry emere na strawberries ohuru ma o nweghi Jell-O? Ee, ọ ga-ekwe omume ma ọ na-atọ ụtọ! Ihe nzuzo na-agbakwunye ọhụụ mbelata strawberry gị achicha batter na mix ndị fọdụrụ n'ime gị buttercream frosting n'ihi na a ọhụrụ strawberry achicha uzommeputa na-atọ ka ezigbo strawberries!
Ọ bụrụ na ị gara Pinterest n’oge na-adịbeghị anya, ị ga-enwe ihe dịka otu ntụziaka TRILLION maka achicha strawberry. M gbalịrị ole na ole site na ụfọdụ nnukwu aha blọọgụ m chere na ọ ga-ejide n'aka nnyefe ma nwa m nwere nkụda mmụọ. Otutu Ezi ntụziaka nwere ma ọ bụ Jell-O maka ekpomeekpo strawberry ma ọ bụ ojiji nke igbe ọkpọ.
“Ọ na-ebe ákwá mgbe ọ na-ebe ákwá.”
esi eme ụlọ ahịa zụtara achicha agwa nụrụ ụtọ arụrụ n'ụlọ
Achọrọ m ka esi esi nri ngwa ngwa nke ejiri ezigbo strawberries mee! Nke ahụ abụghị ihe karịrị akarị ịjụ?
Ugbu a abughi m onye na - eme achịcha kacha mma n'ụwa mana enwere m ihe ịma aka ka m wee nwee onwe m iji hụ ma m ga - enwe ezigbo achicha strawberry. Enyere m onwe m iwu abụọ. Ekwesịrị m iji ezigbo strawberries na ụtọ ya detụ ire dị ka ezigbo strawberries na achicha naanị.
Nwere ike ịme achịcha strawberry ọhụrụ na-enweghị Jell-O?
Ugbu a emela ka m mehie. Ahụrụ m Jell-O n'anya mana ọ bụghị na achịcha m. Gelatin abụghị ihe m ga-eche ịgbakwunye na achicha m iji mee ka mpempe akwụkwọ dị ọkụ, dị ka chịngọm na ok. Echere m na ihe kachasị njọ banyere achicha strawberry ejiri Jell-O bụ na ọ na-atọ ka strawberries.
Mara mma na jolly ranchers ma ọ bụghị nke ukwuu na m achicha. Otu nsogbu m nwere bụ ime achịcha strawberry na-enweghị gelatin.
Ọhụrụ strawberry achicha ule na ada ada
N'ihi ya, amalitere m ịnwale usoro nri achịcha strawberry nke m. Enwetụbeghị m ọrụ siri ike otu uzommeputa. NT manyTA ọtụtụ mgbalị ndị m kụrụ afọ n’ala, ọ fọrọ nke nta ka m kwụsị. Nke a bụ eleghị anya ụzọ ozi karịa ka ị na mgbe ọ bụla mkpa ịma banyere strawberry achicha.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị m gbalịrị ịme achịcha strawberry na-aga nke ọma na strawberries ọhụrụ.
Nwere ike ịgbakwunye mkpụrụ osisi ọhụrụ na vanilla achicha iji mee achịcha strawberry?
You hụtụla vidiyo na-eme achịcha ebe ha na-egbutu strawberries ọhụrụ ma tinye ha na achicha achicha ahụ ma kwuo na ọ na-atọ ụtọ? Ọ dị m nwute, mana nke ahụ bụ ụgha buru ibu.
Mgbe a na-eme achịcha mkpụrụ osisi, ọ bụghị naanị na ha anaghị ekpomeekpo strawberry kama ha na-achagharị agba dị egwu na agba ntụ. Ọ dị ka akpa nke mkpụrụ rere ure na achicha achicha. B appetGH appet agụụ ma ọlị!
N’oge mbụ m lere ule, m na-egbute obere osisi strawberry n’ọkụ ma kụpụ ihe ọicesụ juụ ahụ. M gbakwunyere strawberries ndị ahụ na-egbu mmiri na ihe ọ juiceụ juiceụ na mmiri ara ehi. M wepụrụ otu mmiri ara ehi dị ka ihe ọ theụ juiceụ m tinyere nke mere na anaghị m etinyekwu mmiri mmiri na m batter. Ejiri m 1 oz belata shuga site na ịza ajụjụ maka shuga ọ bụla na mkpụrụ osisi strawberry.M doro m anya na nke a agaghị arụ ọrụ mana m chọrọ ijide n'aka. Dị nnọọ ka m tụrụ egwu, achicha a dị nnọọ mmiri mmiri, sie ike, na agba aja aja. Ọ bụghị achicha mara mma nke m na-eche n'echiche.
esi achicha italian buttercream
Friza-Mịrị Strawberry achicha Ule
Na ule a, m kpebiri na m jiri ifriizi-Fikiere strawberries. Kpamkpam adịghị mfe ịchọta dị ka ọhụụ mana ọtụtụ ebe na-ebu ha. Ha adịghị ọnụ ala. 1.7oz akpa na-efu m ihe $ 4. Ejiri m akpa ahụ niile.
M gweriri mkpụrụ osisi strawberries m n’ime ihe na-esi ísì ụtọ, sụchaa nnukwu chunks ma tinye ya na ihe m mere. Enwere m mmetụta na achicha a nwere ike ịchọ mmiri ọzọ ka m wee gbanye mmiri mmiri ma gbakwunye obere mmanụ ihe oriri. M tinyekwara aka nke pink na uhie nri na-agba agba iji gbochie aja aja.
Achicha achicha di ezigbo nma! Ngwurugwu ahụ dị mma nke ukwuu, ekpomeekpo ahụ bụ ihe na-enwu gbaa, na-atọ ụtọ strawberry na mmeri na akwụkwọ m! Mana m ka na-achọ uzommeputa ahụ na REAL strawberries.
Ekpebiri m ime otu ule ọzọ.
Ọhụrụ strawberry achicha mere na a strawberry Mbelata
Agbalịrị m iji mbelata mkpụrụ osisi na ule ndị gara aga mana udidi ahụ ka dị. Oge a ka m gbalịrị ịbelata mmiri mmiri ọzọ iji belata oke mbadamba. M tinyekwara na lemon zest iji mee ka tartness nke mkpụrụ osisi strawberry sikwuo ike.
ihe a ga -eji maka achicha ntapu ọla edo
Ejikwara m strawberry emulsion kama nke wepụ strawberry (adịghị mkpa mana ọ na-enye aka na agba na ekpomeekpo). Enwekwara m otu obere tụlee nke nri pink pink agba? Iji nweta pink pink agba m na-achọ.
Nsonazụ ahụ? Achicha strawberry siri ike ma sie ike nke na-atọ ụtọ dịka strawberries.
Agaghị m agụ gị, anaghị m eti mkpu ọ joyụ mgbe m bechara n'ime achicha a! Ngwurugwu ahụ zuru oke! Nri ahụ dị ịtụnanya! Achọpụtara m na ụlọ niile nke ụlọ na-amanye nwa m nwanyị, di m na onye enyemaka m nwalee achịcha ahụ ozugbo. Achọrọ m ijide n'aka na anaghị m ara ara. Na nke a bụ ezigbo ahịa!
Rave nyocha gburugburu! * onwe-elu-ise *
Otu esi eme ka mbelata ahihia
Gwakọta strawberries na shuga gị na ihendori. Ọ bụrụ na oyi kpọnwụrụ ha, buru ụzọ kpochapụ ha. Ọ bụrụ na ha dị ọhụrụ wepu elu na iri n'ime chunks. Gwakọta ya na ngwakọta mmiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ mbelata dị nro.
Weta ngwakọta ahụ na obụpde wee belata ka ọ dajụọ. Mgbe ụfọdụ ebido igbochi ọkụ.
Ozugbo mbelata mkpụrụ osisi strawberry dị oke ka pasta tomato, ị ga-aga!
Gwakọta na lemon zest, ihe ọ juiceụ juiceụ na nnu.
Mee ka mbelata mkpụrụ osisi strawberry dị jụụ tupu i jiri ya na achicha achicha gị. Eji m ọkara na mwakpo na ọkara na ntu oyi!
-Esi mee ka gị strawberry oyi akwa achicha
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu otu esi ntu oyi ma jupụta achicha, lelee nke m -esi mee ka gị na akpa achicha nkuzi
Dị njikere na achịcha gị na-ajụ oyi ma ọ bụ ọbụlagodi oyi kpọnwụrụ mgbe ha na-akwakọba ka ha dịrị mfe ijikwa. Kpochapu agba aja aja na elu ma ọ bụrụ na achọrọ.
Mee ka buttercream gị ma gbasaa na mbelata mkpụrụ osisi strawberry maka frosting strawberry ọhụrụ ma dị ụtọ!
Debe akpa oyi akwa nke achicha strawberry wee gbasaa na oyi akwa nke ntu oyi. Gbalịa idobe ya.
Debe achicha achicha gi ozo ma tinye ya na akwa ozo.
Kpuchie achicha niile n'ime obere buttercream buttercream wee daa na ngwa nju oyi maka nkeji 20 ruo mgbe buttercream siri ike. A na-akpọ nke a uwe mgbokwasị.
Frost na achicha a ikpeazụ oyi akwa nke buttercream na icho mma dị ka ha chọrọ! Achicha a ga-edozi ruo mgbe ọ na-eje ozi. Kwe ka achicha ahụ nọrọ ọdụ na ụlọ okpomọkụ maka awa 2 tupu ị na-eje ozi. Achịcha oyi adịghị atọ ụtọ nke ukwuu!
Enwere m olileanya na ị ga-enwe mmasị na nhazi a! Biko jikọọ na nhazi a ma ọ bụrụ na ị mee ya ka m wee hụ ihe okike gị!
Achịcha strawberry ọhụrụ a sitere na Mbelata strawberry mbelata! Achịcha ahụ dị nro ma dị nro nwere agba mara mma pink. Achịcha zuru oke maka oge okpomọkụ! Ntụziaka a na-eme ka okpukpu atọ nke 8'x2 'gbaa gburugburu na strawberry buttercream na strawberry ndochi. Oge Nkwadebe:iri abụọ Nkeji Oge nri:iri ise Nkeji Oge niile:1 Obiano 10 Nkeji Calorisị:Ogbe 603kcal
Fresh Strawberry achicha Efrata
▢14 ounce (397 g) niile ntụ ọka
▢1 1/2 teaspoons ntụ ịme achịcha
▢1 ngaji ntụ iji koo achịcha
▢1/2 ngaji nnu
▢8 ounce (Ogbe 226 g) unsired butter ime ụlọ okpomọkụ
▢10 ounce (Ogbe 284 g) granulated shuga
▢1 ngaji wepụ vanilla
▢1/2 ngaji lemon wepụ
▢1 1/2 ngaji emulsion strawberry ma ọ bụ wepụ, ana m eji LorAnn mmanụ buredi emulsion
▢zest otu oroma nkịrịsị
▢1 Tebụl ihe ọ juiceụ juiceụ lemon ohuru
▢6 ounce (Ugba 170 g) akwa ọcha ime ụlọ okpomọkụ
▢4 ounce (Ogbe 113 g) mbelata strawberry ime ụlọ okpomọkụ
▢6 ounce (Ugba 170 g) mmiri ara ime ụlọ okpomọkụ, mmiri ara ehi zuru oke kacha mma
▢1/2 ngaji Pink nri nri Ana m eji gel pink American Americolor
▢32 ounce (907 g) ohuru ma obu friji strawberries gbazee
▢1 ngaji lemon zest
▢1 Tebụl ihe ọ juiceụ juiceụ lemon
▢1 tuo nnu
▢4 ounce (Ogbe 113 g) shuga nhọrọ
Mfe Strawberry Buttercream Frosting
▢16 ounce (454 g) unsired butter ime ụlọ okpomọkụ
▢Guzosie igwekota na whisk na naa ihe mgbakwunye (ma ọ bụ a aka igwekota)
▢Atọ, 8'x2 'achicha gburugburu
Ntuziaka Mbelata Strawberry
Ana m akwado ịme mbelata a ụbọchị tupu ị dị njikere ịme achịcha gị.
Debe strawberries ndị ọhụrụ ma ọ bụ thawed, oyi kpọnwụrụ n'ime ihendori. Nhọrọ: gwakọta strawberries na emersion blender ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ a mụrụmụrụ udidi nke strawberry Mbelata.
Okpomọkụ na ọkara-elu ma gbakwunye na shuga (ma ọ bụrụ na achọrọ), lemon zest, ihe ọ lemonụ lemonụ lemon na nnu. Kpalie oge iji gbochie ire ọkụ.
Ozugbo na-afụ ụfụ, belata okpomọkụ na ọkara-obere ma jiri nwayọ belata ruo mgbe mkpụrụ osisi amalite ịmalite ma ngwakọta ahụ belata ihe dịka ọkara. Nke a ga-ewe ihe dịka nkeji iri abụọ. Ọ bụrụ na ngwakọta gị belata ọkara ma bụrụ mmiri mmiri, gaa n'ihu na-esi nri ruo mgbe mmiri mmiri niile ga-apụ.
Site n'oge ruo n'oge kpaliri ngwakọta iji gbochie ire ọkụ. Ikwesiri ijiri ihe dika iko abuo nke nkpuru ahihia nke yiri ihendori. Nyefee na akpa ọzọ ma jụụ tupu ojiji.
Will ga-eji ụfọdụ mbelata maka achicha achicha ahụ, ụfọdụ maka frosting na ndị fọdụrụ maka jupụta n'etiti achicha achicha maka mmiri ọzọ. Enwere ike ịchekwa ihe fọdụrụ na friji ruo otu izu ma ọ bụ oyi maka ọnwa isii.
Ntuziaka achicha Strawberry
MARA: Ọ dị ezigbo mkpa na ihe ọkụkụ ụlọ niile edepụtara n'elu bụ ọnọdụ ụlọ ma ọ bụghị oyi ma ọ bụ ọkụ.
Jide n'aka na ịwepụ mkpụrụ osisi strawberry gị site na friji 1 awa tupu ị mee achịcha gị ka ọ wee nwee okpomọkụ.
Gbanwee ihe mkpuchi oven na etiti ya wee kpalie ya 350ºF / 176ºC.
Griiz atọ achicha achịcha atọ na achicha goop ma ọ bụ masịrị pan tọhapụ
Na efere dị iche, gbanye mmiri ara ehi, mbelata mkpụrụ osisi, emulsion strawberry, wepụ vanilla, wepụ lemon, lemon zest, ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, na agba agba nri pink.
Na efere dị iche, gbanye ntụ ọka, ntụ ịme achịcha, soda na nnu.
Tinye bọta ụlọ dị na igwekota ihe nkwụnye gị na mgbakwunye ihe mkpuchi wee tie aka na ọsọ ọsọ ruo mgbe ọ ga-adị mma ma na-egbu maramara, ihe dị ka 30 sekọnd.
Jiri nwayọọ nwayọọ fesaa na shuga, tie aka ruo mgbe ngwakọta na-aga nke ọma na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọcha, ihe dị ka minit 3-5.
Tinye akwa ọcha na akwa otu otu, na-akụ 15 sekọnd n'etiti. Ngwakọta gị kwesịrị ịdị na-emekọ ọnụ n'oge a. Ọ bụrụ na ọ dị ka curd na gbajiri agbaji, bọta gị ma ọ bụ akwa ọcha dị oke oyi.
Gwakọta na obere ọsọ ma gbakwunye ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ihe akọrọ na batter, soro ihe dị ka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngwakọta mmiri ara ehi, gwakọta ruo mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na a na-etinye ihe ndị ahụ na batter. Tinyegharịa usoro 2 ugboro ọzọ. Mgbe batter ahụ pụtara agwakọtara, kwụsị igwekota ahụ ma jiri spatula roba kpochapu akụkụ nke efere ahụ. Ọ bụrụ na ọ dị ka ice cream, ị mere ya nke ọma!
Kewaa ihe otiti n’etiti ihe ejikere. Ire ụtọ n'elu na a roba spatula.
Ime achịcha na 350ºF / 176ºC ruo mgbe ha chere na etiti ha na ezé ezé na-apụta dị ọcha ma ọ bụ jiri obere iberibe na ya, ihe dịka 30-35 nkeji.
Tinye pans n’elu eriri waya ma hapụ ka ọ dị jụụ maka nkeji 10. Mgbe ahụ tụgharịa achịcha gị na racks ma kpoo kpamkpam.
Ozugbo ị dị jụụ, gbanye akwa ọ bụla na plastik ma friji ma ọ bụ kpoo tupu ị gbakọta achicha gị.
Tinye akwa ọcha na shuga ntụ ntụ na nnukwu efere. Gbakwunye whisk na ikpokọta ihe ndị dị ala wee pịa elu maka minit 5
Ebe pasteurized akwa ọcha na powdered sugar na nnukwu efere nke gị guzoro igwekota. Tinye mgbakwunye whisk na ikpokọta ihe ndị dị ala, wee pịa elu maka minit 5.
Tinye na bọta gị dị nro na ụtarị ma pịa elu maka minit 8-10 ruo mgbe ọ na-acha ezigbo ọcha, na-enwu gbaa ma na-egbuke egbuke. Ọ nwere ike ịdị ka curdled na odo na mbụ, nke a bụ ihe nkịtị. Nọgide na-apịa ihe.
Tinye na mbelata strawberry, wepụ vanilla na nnu wee gaa n'ihu na-apịa ihe ruo mgbe etinyere ya.
Nhọrọ: Gbanwee na mgbakwunye na paddle ma jikọta ala maka minit 15-20 iji mee buttercream dị ezigbo mma ma wepu ikuku.
Cochọ Mma achicha
Debe achicha nke strawberry gi n’elu achicha achicha ma obu n’elu achicha. Ewepụsị dome ahụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa iji mma dị nkọ wee mee ka elu achicha ahụ dị mbadamba.
Tinye akwa oyi akwa ma ọ bụ Mbelata gị dị jụụ n’elu ala ahụ. Nke a na-enyere aka banye n'ime achicha ma gbakwunye mmiri na ekpomeekpo strawberry.
Tinye akwa buttercream nke strawberry, m gbara ihe dika 1/4 '. Mee ka spatula gị dị ọcha dị mma ruo mgbe ọ dị larịị.
Frost n'èzí achicha gị na buttercream fọdụrụnụ ma chọọ ya mma. strawberries ma ọ bụrụ na ha chọrọ.
Gbaa mbọ hụ na ihe niile ị na - eme (akwa ọcha, mmiri ara ehi, bọta, mbelata) bụ okpomọkụ dị n’ime ụlọ ma ọ bụ kpụ ọkụ ọkụ ka batter gị ghara igbochi ya.
Maka ihe ịga nke ọma kachasị mma, jiri ogo nri tụọ ihe gị. Tụgharị uzommeputa a na iko nwere ike iduga ọdịda. Gụọ akwụkwọ ozi m banyere otu esi eji ọnụ ọgụgụ maka ozi ndị ọzọ.
M na-eji Pink American Americolor nri agba? iji nweta m mara mma pink agba. Ọ nwere ike ịdị ka ịghọ aghụghọ ule, mana ọ bụrụ na ịgbakwunyeghị ya, agba site na strawberries ga-akpọọ nkụ na achicha gị ga-acha ntụ.
Ana m eji nke m Bosch Universal tinyere igwekota maka nke a, mana ịnwere ike iji igwekota KitchenAid ma ọ bụ igwekota aka.
Ikwesiri iji akwa WHITES maka uzommeputa a, odo site na akwa nwere ike igbanye n'ime piich achicha gi.
Ọ na-amasị m iji mmanụ mmanụ LorAnn emulsion beri achicha, mana i nwekwara ike iji wepụ.
Ndetu ihe ndị edeturu:
Mgbe ị na-eme mbelata gị, ebumnuche bụ ị nweta mmiri dị ka o kwere mee na-enweghị ire ọkụ strawberries. Ngwakọta kwesịrị ịdị ka okpokoro tomato ma belata ọkara.
Akwụkwọ Strawberry Buttercream:
Gbaa mbọ hụ na ntu oyi gị dị oke ọcha ma cha ọcha tupu ị gbakwunye na puree. Nye ya ihe ụtọ, ọ bụrụ na ọ ka na-atọ ụtọ dịka bọta, gaa n’ịpịa ya ọnụ rue mgbe ọ ga-atọ ụtọ dị ka ice cream.
Ọ bụrụ na buttercream gị yiri curdled, ọ dị oke oyi. Wepụ 1/2 iko buttercream ma gbazee ya na microwave ruo mgbe ọ ga-agbaze. Ihe dị ka sekọnd 10-15. Wunye ya azụ n'ime mmiri ara ehi gị, ma gwakọta ya ruo mgbe ude mmiri.
Na-eje ozi:1na-eje ozi|Calorisị:Ogbe 603kcal(30%)|Carbohydrates:63g(iri abụọ na otu%)|Protein:3g(6%)|Abụba:39g(60%)|Abụba Ajuju:24g(120%)|Cholesterol:Ogbe 102mg(3.4%)|Sodium:Ogbe 222mg(9%)|Potassium:89mg(3%)|Eriri:1g(4%)|Sugar:iri iseg(56%)|Vitamin A:1190IU(24%)|Vitamin C:Ugboro abụọmg(4%)|Calcium:37mg(4%)|Iron:0.8mg(4%)
uzommeputa maka ndochi peach pie
ike ikuku 1 akwa elu dị elu
egwuregwu nke oche n'oche akara njegharị ọcha
Ihe ngosi nzuzo nzuzo nke victoria na -egosi ndị na -eme 2016
kedu ihe mere smith agaghị eme ụbọchị nnwere onwe 2